မြန်မာ apk များစုစည်းမှု ( ၅၉ ခု = 110.24 MB ) ~ သန်းတိုးအောင် နည်းပညာမှတ်စု
ဒီနေရာကိုနှိပ်ပြီး ခေါင်းစဉ် အလိုက်ရွေးချယ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်.....
Custom Rom တင်နည်းများ
Hardisk Partition tools
Operating Systems Installing
Pattern Lock ဖြည်နည်း
မြန်မာ apk များစုစည်းမှု ( ၅၉ ခု = 110.24 MB )
Android ဖုန်းတွေမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြတဲ့၊ လူကြိုက်များတဲ့ မြန်မာ apk လေးတွေကို စုစည်းတင်ပေး လိုက်ပါတယ်။ သီတင်းတွေ၊ keyboard တွေ၊ ငတက်ပြား game တွေ၊ browser တွေ၊ ပြက္ခဒိန်တွေ၊ သီချင်း site တွေ၊ ငွေလဲနှုန်းတွေ၊ နည်းပညာတွေနဲ့ မြန်မာဂျာနယ် Site တွေပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော် ရှာတွေ့သမျှ သိမ်းထားတဲ့ apk လေးတွေကို တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ပြန်ရှဲတယ်ဆိုပါတော့။ ကြိုက်ကြမယ်ထင်ပါ တယ်။ Size တော့နည်းနည်းကြီးတယ်။ သီးခံပြီးစိတ်ရှည်ရှည် Down ကြပါ။ လိုချင်ရင် အောက်က Link မှာ Down ပြီး Unzip လုပ်၊ Phone မှာ Install လုပ်ပြီး သုံးနိုင်ပါပြီဗျာ... Download >>> https://www.box.com/s/6hkt1wikdcjlybgal5tf From: ကို မောင်ပေါက်
2 Comments Tawanchai toungdeeJuly 8, 2013 at 6:50 AMကောင်းပါတယ်ReplyDeletePya Phyo AungJuly 17, 2014 at 6:18 AMခွဲပြီးတော့တင်ပေးလို့ရမလား ခဗျား ကျွန်တော် လိုချင်တဲ့ app က kabyar apk ပါ အကုန်လုံးကို ဆွဲချင်ပါတယ် Connection မကောင်းတော့ Down နေတုန်းFail ဖြစ်သွားတယ်ဗျား။G 730 မှာသုံးလို့ရတဲ့ Kabyar apk Link လေးရှိရင် ပေးပါဗျာReplyDeleteAdd commentLoad more...
မိမိ blog မှာကြော်ညာထည့်ချင်ရင်
မန်ဘာဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်-မန်ဘာဝင်ခဲ့ခြင်းဖြင့်ပိုစ့်အသစ်တင်တိုင်း Gmail ထဲရောက်နေမှာပါ...
ဒီဆိုဒ်လေးအတွက် update ပေးသမျှ post များကို မိမိ ဖုန်းတွင် Online/Offline ဖတ်ရှု့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
Arial Zawgyi Font Download
Window 8 မှာ ဒီ Blog က စာတွေဖတ်ရတာ အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် အပေါ် က Font လေးကို Download ပြီး Windows ဖိုင် ထဲက Font ဖိုင်ထဲကိုကူးထည့်ပေးပါ သို့မဟုတ် Font ဖိုင်ကိုဖွင့်ပြီး Install ကိုနှိပ် ပါ
SAMSUNG and HUAWEI Firmwre စုစည်းမှု
((( Save လုပ်ပြီး သိမ်းထားရမဲ့ စာအုပ်အစုံပါတဲ့ Links ))) စာအုပ် ၀ါသနာအိုးတွေ အတွက် ..
((( Save လုပ်ပြီး သိမ်းထားရမဲ့ စာအုပ်အစုံပါတဲ့ Links ))) စာအုပ် ၀ါသနာအိုးတွေ အတွက် .. အရမ်း ကို Smart ကျတဲ့ Links .. ---------------...
Telenor ဖုန်းကဒ် အသုံးပြုသူတိုင်း မဖြစ်မနေ ဆောင်ထားရမယ့် Apk လေးတွေ စုစည်းပေးလိုက်ပါတယ်
1/ Zero Facebook.apk ဒီApp လေးကတော့ Telenor က Facebook ကို Free သုံးဖို့ တရားဝင် ခွင့်ပြုပေးထားတာပါ။ 2/ Opera Mini.apk ဒီ Appေ...
Facebook အသုံးပြုနည်း သရုပ်ပြပုံများနှင့် တဆင့်ခြင်း လက်တွေ့ရှင်းပြထားသည် Facebook အသုံးပြုနည်း မြန်မာလို စာအုပ်ပါ သရုပ်ပြပုံများနှင့် တစ်ဆင့်ခြင်း မြန်မာလိုလက်တွေ့ရှင်းပြထားပါတယ်။ ယခုမှစသုံးနေသူများနှင့် ပ...
pass= MMAS မြန်မာနိူင်ငံတွင်လူသုံးများတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားများတွင်ပါဝင်သော Huawei device အတွက် Official Firmware တွေကိုအလွယ်တကူ ဒေါ...
coolpad 7060 nv fail လဲ ပူစရာမလို3G မတက်တော့မှာလဲပူစရာမလို Firmware ဈေးနူန်းသက်သာတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားဖြစ်လို့ အထင်တော့ မသေးလိုက်ကြပါနဲ့ ဗျာ သူလေးက ဈေးနူန်းသက်သာပြီး အော်ရီဒူးသုံးလို့ရလို့ အလွန်အ...
iOS Firmwares Download ရန်
Facebook chat room သို့ဝင်ရန်
ပြောချင်တာလေးများရှိခဲ့လျှင် Chat ပုံလေးကိုနှိပ်ကာ chat room တွင်facebook Account ဖြင့် ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ..........
Copyright © 2014 သန်းတိုးအောင် နည်းပညာမှတ်စု All Right Reserved